🥇 ▷ 5 khuraafaadyada ku saabsan wadnaha si aad u joojiso inaad naftaada ku burburin jiimka adigoon helin wax ✅
5 khuraafaadyada ku saabsan wadnaha si aad u joojiso inaad naftaada ku burburin jiimka adigoon helin wax
Tababbarka shaqsiyeed ee dadka caanka ah sida Emma Stone ama Bradley Cooper ayaa furahooda siiya si aadan micno ugu dhicin
Cardio waa jimicsi muhiim u ah jimicsigayaga joogtada ah. Haddii aad yeelato murqo fara badan laakiin aadan sameynin jimicsi wadnahaaga sii nooleeya, runti markii aad weynaato, waxaad ku soo gabagabeyneysaa isla dhibaatooyinka la xiriira wadnaha oo dadka caadeysan inaysan isboorti sameynin noloshooda oo dhan. Kordhi laxanka wadnahaaga inta u dhaxaysa 150 iyo 300 daqiiqadood usbuucii, marka lagu daro caawinta inaad lumiso miisaanka ama kahortagga wadne istaagga, kansarka oo aad cimri dheereyn guud ahaanWaxay kaa caawinaysaa inaad hagaajiso hurdada, walwal, niyad jab iyo xitaa walwal. Kaalay, waa xulufad qaali ah.
Laakiin xaqiiqdii waligaa waxaad naftaada ku aragtay naftaada oo ku silicaya goobta jimicsiga iyo adoo dareemaya inaad waxa aad samayso meelna aan aadayn Cardio aad u badan ayaa waliba dhaawici kara, khubaro badan ayaa u digaya majaladda Inverse. Khabiirka takhasuska leh ee la xiriiray waxaa ka mid ah Jason Walsh, Tababaraha shakhsi ahaaneed ee dadka caanka ah sida Emma Stone ama Bradley Cooper, iyo kuwanu waa shanta khuraafaad ee ay burburiyeen.
Muhiim maahan inaad dhidid dufanka dufanka si qalbigaagu u ogaado inaad sameyso wadnaha. Waxaa jira qaabab aan dhammaad lahayn oo lagu sameeyo samaynta wadnaha oo aan ku lug lahayn kursi ku-qabashada muddo 45 daqiiqo ah: fuulitaan, fuulid, yoga, isboorti ubax iyo koox ama doon yar yar ayaa tusaalayaal wanaagsan oo madadaalo iyo jimicsi madadaalo ah oo aad ku sameyn doonto wadnaha wadnaha dhib la’aan, taas oo kuu oggolaaneysa inaad sii dheereeyso waqtiga aad u hibeyso sameynta wadnaha adigoon adiga oo keliya ka baryaynin inaad fadlan wax walba hal mar dhammeysid.
Inta badan ee wadnaha, way fiicantahay
Run ma ahan in inta aad dhididdo miisaankaaga badan uu lumi doono. Waa inaad ku sameysaa jimicsiga adigoo si taxaddar leh u shaqeynaya maxaa yeelay haddii aad dareento isku dheelitir la’aan gudaha ah, waad ku dambeyn kartaa inaad sii waddo. Waxaa wanaagsan inaad kordhiso xoogga si tartiib tartiib ah oo markasta xakameynaya garaaca wadnahaaga. Sida Walsh leeyahay: “iska hubi inaad taqaanid sida loo socdo kahor intaadan orrin.” Mana aha wax si cad loo yiri: “Waxaan arkay dad dhahaya waxay yaqaanaan sida loo ordo iyo marka ay bilaabaan waxay u eg yihiin frogs gudaha aagagga,” ayuu raaciyay.
Miisaan ayey kaa dhigaysaa
Waa run, laakiin ilaa xad. Haddii waxa aad rabto ay tahay inaad lumiso miisaanku waa inaad lahaataa xakamayn badan oo dhaqdhaqaaqaaga ah maxaa yeelay dhab ahaantii, sameynta wadnaha wax ka badan 40 daqiiqo maalintii waxay kuu horseedaysaa inaad bilowdo gubashada unugyada muruqyada, taas oo ugu dambeyntii kuu horseedda inaad lumiso wixii aad soo tababartay. Layliyada ugufiican ee lumiyo culeyska ayaa ah kuwa ugu dhameystiran sida socodka ama talaabada.
Ku celcelintu waa guul
Waxaa la muujiyey in nidaamku caadi u yahay furayaasha jimicsigu inuu wax ku ool yahay, laakiin ku soo celcelinta xad dhaafka ah ee jimicsi isku mid ah ayaa kaa xanaajin kara maxaa yeelay jirka ayaa is waafajinaya oo joojinaya shaqada. Mararka qaarkood waa ku filan tahay in la beddelo xawaaraha, tirada ku celcelinta ama iska caabbinta.
Avarice-ka ayaa jebisa boorsada
Waxaa loo yaqaan HIT (Tababbarka Udhaxeynta Sare ee Xoog-Weyn) oo waa bedel ahaan saacad badhkeed oo caadi ah in, marka la eego daraasadda ugu dambeysay, ay kuu oggolaaneyso inaad gubto dufan ka badan laylisyada wadnaha. Kalfadhiyada HIT waxay u dhexeeyaan 20 illaa 30 daqiiqo, laakiin waxay kaa dhigayaan inaad dufan gubto saacado. Isku dar jimicsiyada adke ee kuwa ka khafiifsan si aad u hesho waqtiyo nasasho. Jimicsiyada culeyska qaarkood ayaa waliba leh saameyn.
Cuntaddiisu way fududahay: iskudar jimicsiyada, laakiin waxaas oo dhan, ka hel goob-hawleedyo aad jeceshahay, maxaa yeelay waa habka keliya ee aad ku kasban karto.